GYP သို့ ခရီးစဉ်- BRIDGEMAS EDITION - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - အင်္ဂါရပ်များ
Gyp သို့ ခရီးစဉ်- Bridgemas Edition
မင်္ဂလာပါ နောက်ထပ်သေးငယ်တဲ့ Cambridge gyp မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဤအချိန်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည် Bridgmassy ခံစားနေပြီး သင့်အား Bridgemas နေ့အတွက် အလားအလာအချို့ကို ယူဆောင်လာပါသည်။
စနေ၊ ဟင်းချက်နည်းများကို လေ့လာရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို သိရှိရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။ သင်သည် အပျက်အစီးများနှင့် ယိုဖိတ်မှုများနှင့် အလယ်အလတ် ချက်ပြုတ်မှုအချို့ကို ရူးသွပ်စွာ စီးနင်းရန် ရောက်နေပါသည်။
Mainsbury ၏ Mulled Wine ထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
Mainsbury's မှဝယ်ရုံဖြင့် mulled ဝိုင်ကို သင်ဘာလို့လုပ်ချင်တာပါလိမ့်လို့ တွေးနေနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါဟာ တကယ်တော့ ရိုးရှင်းပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ ထို့အပြင်၊ ငွေများများစားစားဖြင့် တစ်အိမ်လုံး မူးအောင် လုံလောက်အောင် လုပ်နိုင်သည် - သေချာသည်မှာ ဤနေရာတွင် နံပါတ်တစ် ဦးစားပေးဖြစ်သည်။
ပထမဦးစွာ၊ သင်ရှာတွေ့နိုင်သော အကြီးဆုံး ဟင်းအိုးကို ရှာရန် သင့်စင်္ကြံတစ်ခုလုံးကို ကြေးချွတ်ပါ။ ထို့နောက် သင်လိုအပ်သမျှမှာ-
သစ်ကြံပိုးခေါက် ၁ ချောင်း
လေးညှင်းပွင့် (၁၀ လုံးလောက်သုံးတယ်)
ချယ်ရီဘရန်ဒီ 100 မီလီလီတာ (သူမကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ Rachel နဲ့နေရတာ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့အိမ်ဖော်တွေက အရက်သမားမဟုတ်ရင် Sainsbury မှာ တချို့ကို မင်းရှာတွေ့နိုင်တယ်)
ဝိုင်နီတစ်ပုလင်းနှင့် တစ်ဝက် (ဒါဟာ ဆန်းပြားတဲ့အရာတွေ မလိုပါဘူး၊ ငါ့ကိုယုံပါ၊ ငါတို့က ဆန်းကြယ်တယ်)၊
ဒီပုံမှာ သကြားထည့်ဖို့ မေ့သွားတယ် - အဲဒီညက အမှားများစွာထဲက ပထမဆုံးပါ။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန် ပါဝင်သူအားလုံးသည် ညအိပ်ဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားသင့်ပြီး ဝိုင်ချက်ခြင်းအတွက် အချိန်ဖြုန်းခြင်းအတွက် အလုပ်များလွန်းလှသည်။
1. ဒယ်အိုးကြီးကြီးကို မီးဖိုပေါ်မှာ အလယ်အလတ်အပူပေးလိုက်ပါ။ အရက်ကို ဖယ်ရှားနိုင်သောကြောင့် မပြုတ်ပါစေနှင့်။ သစ်ကြံပိုးခေါက်တချောင်းနဲ့ သစ်ကြံပိုးခေါက်တလုံးကို ထောင်းထားပါ။
အဓိပ္ပါယ်ရှိသော မြက်အားလုံးကို စားပါ။
2. လိမ္မော်သီးကို နှစ်ခြမ်းခွဲပြီး ခရစ္စမတ်ခရစ်စတီးလ်စ်နှင့် ဆင်တူသည်အထိ လေးညှင်းပွင့်များကို ဖိပေးပါ။ အလွန်အကျွံဖိပြီး လိမ္မော်ရည်ကို မျက်လုံးထဲ မဖြန်းပါနဲ့။ သင်သတိပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ဒယ်အိုးထဲသို့ ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
JLS တီရှပ်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ Covid ကြောင့် ငါ့ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဟာ နိမ့်ပါးသွားပြီ။
3. သကြား သကြား သကြား။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် သကြားဘယ်လောက်ထည့်တယ်ဆိုတာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အများကြီးပဲ။ နွားသိုးဝိုင်ကဲ့သို့ အရသာရှိသည်အထိ ဆက်ထည့်ရုံဖြင့် စိတ်ချရသော အလောင်းအစားဖြစ်သည်။
Mulled Wine Sugar High.
4. နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ စပျစ်ရည်ကို မိနစ် 20 ခန့်ကြာအောင် ထားလိုက်ပါ သို့မဟုတ် စိတ်မရှည်သော အဖော်ခုနစ်ယောက် စောင့်နိုင်သမျှ ကာလပတ်လုံး ထားလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ခွက်တစ်ခုထဲရှိလျှင် ဇွန်းဖြင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် မွှေလိုက်ပါ။ သင်သိပ်အမိုက်စားမဟုတ်ရင် ဖန်ခွက်ကို လောင်းထည့်နိုင်ပါတယ်။
netflix ရှိ platform ကဲ့သို့ ရုပ်ရှင်များ
သတိပေးချက် စားသုံးတဲ့အခါမှာလည်း ကျေးဇူးပြုပြီး သတိထားကြပါနော်။ မလုပ်နဲ့ ပရိဘောဂတွေပေါ် ဝိုင်တွေ ဖိတ်တယ်။ သင်မည်မျှပျော်စရာကောင်းပြီး ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို ခံစားရပါစေ၊ ဤအရာက စိတ်ခံစားချက်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကျဆင်းသွားစေလိမ့်မည်။ မင်းငါ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကို မယူဘဲနဲ့ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ပျစ်ပျစ်ရည်တွေ ဖိတ်စင်သွားရင် ရှလကာရည်ဖြူဟာ ငါတို့အတွေ့အကြုံအရ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး...
စပျစ်ရည်သောက်ခြင်း၏ အန္တရာယ်ရှိသော သက်ရောက်မှုများ။
ဒါဆို မင်းသွားလိုက်ပါ! Bridgemas ထက် သင့်အား လူကြိုက်များစေမည့် အရသာရှိသော ပျစ်ဝိုင်ပြုလုပ်နည်းကို ယခု သင်သိပါပြီ။ အန္တရာယ်များပြီး သကြားပမာဏများနေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိုင်ကို အောင်မြင်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး ၎င်းကို 10/10 ပေးခဲ့သည်။
Rachel က မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။
နောက်တစ်နေ့တွင် လူတိုင်း အနည်းငယ် ဗိုက်ဆာသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ္စမတ်ပူတင်းကို မတ်ခွက်တစ်လုံးတွင် စမ်းကြည့်ကြသည်။ ငါတို့မှာ ကြီးမားတဲ့ အိပ်မက်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိခဲ့တာမို့ ငါတို့ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်ခဲ့ကြလဲ ကြည့်ရအောင်။
ရိုးရိုးမုန့်ညက်လို့ သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ချက်နည်းက ကိုယ်တိုင်မွေးမြူထားတဲ့ မုန့်ညက်လို့ ပြောတယ်- ငါက အမိုက်စားဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံထဲမှာ ဂျုံမှုန့်မှားထည့်ခဲ့တယ်၊
ဤ Bridgemas ကုသမှုအတွက်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်-
ကြက်ဥ ၂ လုံးကို ထောင်းပါ။
ပေါင်မုန့်မှုန့် 100 ဂရမ်
ဆိပ်ကမ်း ၂၀၀ မီလီလီတာ (ဘရန်ဒီကို သုံးတာက ပိုကောင်းလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါတို့က Rachel တွေအကုန်လုံးကို ဖျော်ရည်အတွက် သုံးတယ်…)
ဝတ်လစ်စားလစ် ပို့ချင်သော မိန်းကလေး
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် (ဖြစ်နိုင်ရင် အလုပ်လုပ်ပေမယ့် Cambridge မှာ ဘယ်တော့မှ အာမခံချက်မရှိဘူး)
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့လုံး ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ စတင်ခဲ့ကြတယ်။ ဟင်းချက်နည်းပျောက်သွားတဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းနည်းရှိတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲထည့်ပြီး မွှေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပုံရပြီး ကျွန်ုပ်အကြံပြုသောဆိပ်ကမ်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်လွတ်လပ်ပါသည်။
ယောက်ျားလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ဘာကြောင့် ကိန်းဂဏန်းတွေ ရေးတာလဲ။
City Millle မှ ကြက်ဥများ ကျွတ်ထွက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် အက်ကွဲသွားသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် နောက်ထပ် စိတ်ထိခိုက်စရာ အတွေ့အကြုံတစ်ခု ရှိခဲ့ပါသည်။
Vivian သည် ကြက်ဥပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်ကြောင်း စိတ်ချနိုင်သည်။
မသမာသောကြက်ဥကို သန့်စင်ပြီးသည်နှင့် အရောအနှောကို ခွက်ထဲသို့ထည့်ရန် အချိန်တန်ပါပြီ။ ယခု၊ မတ်ခွက်ရွေးချယ်မှုသည် အရေးကြီးသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရွေးချယ်ရန် လှပသော ဖန်ခွက်များ မရှိခဲ့ပါ။
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သော အဆိုးဆုံးနှစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စတိုင်ကျတဲ့ ဖန်ခွက်အချို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရောအနှောကို ဖန်ခွက်ထဲတွင် ဘေးကင်းစွာ ထားပြီးနောက် အနီးနားရှိ မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် အလွန်အကျွံမတက်ဘဲ၊ ၎င်းတို့ကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထဲတွင် မိနစ် 20 ခန့်ထားရန် အချိန်တန်ပါပြီ။ ခွက်များ မလျှံအောင် သေချာစစ်ဆေးပါ - ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ တစ်ခု ပေါက်ကွဲလုနီးပါး ဖြစ်နေပါပြီ။ ထို့နောက် ၎င်းတို့ကို ထုတ်၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင် Bridgemas Pudding ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
ကျွန်တော် ရိုးရိုးသားသား ပြောရမှာက ခရစ္စမတ်ပူတင်းထက် ငါတို့က ခရစ္စမတ်ရေမြှုပ်နဲ့ ပိုအရသာရှိတယ်။ ၎င်းသည် အလွန်အရသာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းကို 8/10 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
သင့်ကိုယ်သင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ Bridgemas လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ။
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Gyp ခရီးစဉ်ကို လိုက်လျှောက်ရတာ နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပွဲလမ်းသဘင်တစ်ခုခုပြုလုပ်ရန် သင်သည် အကောင်းဆုံးစားဖိုမှူးဖြစ်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သက်သေပြခဲ့သည်။ ဤချက်ပြုတ်နည်းများကို သင့်ကိုယ်ပိုင် အထိမ်းအမှတ်ပွဲများအဖြစ် စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ တံတားတွေနဲ့ CAM နှစ်သစ်ကူးဖြစ်ပါစေ။